Thursday April 13, 2017 - 22:32:23 in Maqaallo by Halgan News
5. Cidna ha uga warramin inta aayadood ama jus ee aad Qur'aan ka akhriday amase aad taqaanid, balse hab-dhaqankaagu ha sheego oo halaga garto inta aayadood ee aad Qur'aan ka akhriday ama se aad taqaanid. Ogow akhlaaqda Nebigu [Scw] waxa ay ahayd Qur'aan. Halgamaagii reer hindiya ee Gaani ayaa laga hayaa, "Diinta Islaamku heerkan kuma ay soo gaadhin seef, balse waxa ay ku soo gaadhay waa hab-dhaqanka suubban ee uu Nebi Muxammed [Scw] asxaabtiisa kula dhaqmayey!"
8. Dadkii wanwanagsanaa waxa laga hayaa "waligeyo maanu arag qof guul gaadha haddii uu jiro se waxa uu ahaa mid waalidkii u sama-fala." Eebbe ha inaga dhigo kuwo waalidkood u baari noqda.
Sayid Maxamed Cumar "Darwiishka"- Apr-2017